करोडपति हुन चाहानुहुन्छ ? याद राख्नुहोस यी ५ मन्त्र - ज्ञानविज्ञान
मानिस जन्मे पछी हर कोहि धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउन चाहान्छ । समाजमा धनीमानी मान्छेलाई सफलताबारे सोधियो भने परम्परागत उत्तर हुन्छ : कडा मिहिनेत, ठूलो जोखिम लिनु आदि । तर, फोब्र्सले केही धनीहरू जसको पैसा कमाउने फरक तरिका थियो तिनका बारेमा सोमबार एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो ।
फोब्र्सका अनुसार यी धनीहरूले भने फरक खालको अनुभव सुनाएका छन् । फोब्र्स बैंक अफ अमेरिका अन्तर्गतको यूएस ट्रस्ट भन्ने कम्पनीले गरेको अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो । उक्त कम्पनीले अमेरिकाका ६ सय ८४ धनीहरूमाथि अध्ययन गरेको थियो । ती धनीहरू ३० लाख अमेरिकी डलर (३० करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी सम्पत्ति भएकाहरू थिए ।
यी धनीहरू साधारण आम्दानी भएको परिवारमा जन्मि हुर्किएका हुन् । उनीहरू बडो दु:ख गरेर बीउ पुँजी जम्मा गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी धनी भएकाहरू हुन् । ‘परम्परागत रूपमा धनीहरूका सफलताका कथाभन्दा सर्वेक्षणमा समेटिएकाहरूमध्ये धेरैको कुरा फरक रह्यो,’ यूएस ट्रस्टका अध्यक्ष केथले भनेका छन्, ‘उनीहरूको जीवनमा मूल्य वित्तीय रूपमा सक्षम हुने मात्र नभई अनुशासन, पारिवारिक पृष्ठभूमि सानै उमेरदेखि लगानीको अभ्यास आदि थिए ।’
यी धनीहरूका उपाय एकदमै साधारण छन्, जुन अन्यले पनि सजिलै अपनाउन सक्छन् । ७७ प्रतिशत धनीहरू मध्यम वर्गीय वा न्यून मध्यम वर्गीय परिवारमा हुर्किएका हुन् । १९ प्रतिशत भने गरिब परिवारमै हुर्किएकाहरू हुन् । उनीहरू सफल हुनुका यस्ता रहस्य छन् :
उनीहरूलाई हुर्किंदै गर्दा परिवारमा ३ विषयमध्ये कुन महत्त्वपूर्ण भनेर सोधिएको थियो । ती थिए, उच्च शिक्षा, वित्तीय अनुशासन वा काममा सहभागिता । १० मध्ये ८ जनाको उत्तर थियो– अनुशासन । अझ उनीहरूलाई आफ्नो रुचिअनुसार काम गर्न स्वतन्त्र छाडिएको थियो ।
उनीमध्ये अधिकांशले १४ वर्षको उमेरदेखि नै बचत गर्न थालेका थिए । त्यसपछि २५ वर्ष पुग्दा त सेयर, ऋणपत्र आदिमा लगानी गर्ने भइसकेका थिए ।
८१ प्रतिशतले भविष्यको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको बताए । उनीहरू जीवनको लक्ष्य र लगानीका क्षेत्रबारे पहिल्यै योजना बनाउँथे ।
साधारण कम्पनीमा लगानी
धेरैजसोको सोचाइ हुन्छ । ठूला र राम्रा कम्पनीमा लगानी तर यी लगानीकर्ताले साधारण कम्पनीमा लगानी गर्दै गएर सफलता पाएका हुन् ।
यी सबै लगानीकर्ताले करबारे दरिलो योजना बनाउने गरेका थिए । ५५ प्रतिशतले लगानी गर्दा करको भार कम गर्ने योजनामा पनि विशेष ध्यान दिइएको बताए ।
Topics #करोडपति #मन्त्र
Don't Miss it मृत्युपछि शरीरका अंगहरु चल्छन ! सबैले जानी राख्नु पर्ने कुरा
Up Next यदि तपाइको मुख गन्हाउँछ भने गंभिर रोग लागेको हुनसक्छ